Kaararka Sare, Dhaqdhaqaaqa Wool
Waxaa aasaasay 1989, Foshan Shunde Leliu Hingsking Plastik & Waxyaallaha Biraha, Ltd. waa shirkad horudhac ah tufaax tayo sare leh iyo alaabooyinka birta ee suuqa warshadaha. Qalabka wax soo saarka ee ballaadhan waxaa ka mid ah noocyada caagga ah iyo caagagga caaga ah
Maareynta hantida maguurtada Kalluumeysiga Kombiyuutarka Qalabka Xargaha Xargaha Profile caaga Extruded Maaddooyinka Kaararka Moldings caaga Rubber Gogosha Alaabta Kombiyuutarka iyo Caanaha Qalabka
Waxaanu soo saaraa oo ku iibinnaa cajaladaha EPDM ee ku dhowaadba qiyaas kasta iyo dhumucdiisaba. Meelaha adag ee EPDM waxay ku imaanayaan heerar kala duwan oo kala duwan iyo adag....
moldings Our raaxaysan kiimikada fiican iyo guryaha jireed. Waxay yihiin adkaysi u daxalka, saliid, heerkulka hooseeyo sare, xirtaan iyo da 'ah, oo ay leeyihiin xoojinta sare. The alaabta duro caa...
NBR (nitrile caag butadiene) waa nooc ka mid ah caag taas oo uu leeyahay iska caabin ah oo saliid wanaagsan, xirtaan iska caabin ah iyo iska caabin jeex. Ka sokow, waxyaabaha Nitrile doorsoon leeyihii...
Waxaan bixinaa tiro balaadhan oo ah profiles caag extruded, waayo, waxaad ka soo xusho, oo ay ku jiraan dhengedihii xumbo PE, PVC extrusion profiles caag ah, profiles TPE extruded, profiles caag extru...
Iyadoo xulashadayada waaweyn ee ilaaliya doonnida, waxaan damaanad qaadi karnaa badbaadada doonyaha nooc kasta iyo baaxad. Gawaarida doonnida gaaska ah waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo walxaha q...
Ilaaliyaha geesaha koofiyadaha waxaa loo adeegsadaa dalabyo kala duwan oo warshado iyo warshado ganacsi ah si loo hor istaago maadooyinka iyo xakamaynta. Gacan-yaraha kumbuyuutarka ee kumbuyuutarku wu...
Ilaaliyeyaal gaar ah ayaa diyaar u ah in lagu dhiso meelo kala duwan oo ah qaabab kala duwan: laydi, qulqulka, D-qaabeeya, iwm. Waxay ku haboon yihiin ilaalinta gudaha iyo dibedda labadaba, waxayna ku...
Haddii aad ubaahan tahay inaad ilaaliso xayndaabyadaada, kuwa difaacayaashu waa xalka saxda ah. Waxaan bixinnaa gawaarida gawaarida ah ee loogu talagalay ilaha dhaadheer ee gaadiidka xamuulka sare leh...
Dhibaatada dhaadheer waxay ka caawisaa taraafikada dhexdhexaadka ah iyada oo aan la sameynin buuq iyo aan lahayn raaxo darawalnimo. Xargaha sare ee xoogga leh ayaa ah difaac fiican oo waxyeellada saam...
Qoryaha aluminiumka waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo dhinaca geeska ugu sarreeya tallaabooyinka. Noocyada our aluminium ee alwaaxda waxay bixisaa dhamaystiran dhammeystiran oo ilaaliya geesaha ...
Aluminium-kicinta aluminiumta la jajabiyey waxay ka soo baxaan shuruudaha macaamiisheena. Laga soo bilaabo isticmaalka rinjiga cimilada si loo nadiifiyo, burushyadani waa kuwo waxtar u leh oo si sahla...
Qalabka aan saldhigga lahayn ee aan la saarnayn ayaa hubiya in marin ammaan ah dadka indhaha la 'ama indhoolaha ah, taas oo u oggolaaneysa inay gaaraan meel ay si ammaan ah u gaaraan. Meelahan taa...
Waxaanu bixinnaa noocyo badan oo biraha birta ah si loo daboolo baahiyahaaga oo dhan. Alaabooyinkaas waxaa ka mid ah tusaha wax lagu qoro, qalabka aluminiumka aluminiumka, aluminiumada loogu talagalay...
Waxaan bixinnaa xalal badan oo insulin, sida polipopylene weatherstrip, ama dhogorta polypropylene dhogorta leh ama aan lahayn silikoon. Qoyaanka cimilada hawadu waa sahlan tahay in la isku soo ururiy...
100% Alaabta tayada leh
365 Maalmood ee Qalabka Gargaarka
Rakibaadda Oo guddiga